အသုံးပြုသူအတည်ပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှဂျီမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကိုမည်သို့ခိုးယူမည်ကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Gadget သတင်း
Juan Luis Arboledas | | Software များ
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီလျှင် Google နေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများအားလုံးဆက်လက်ကြည့်ရှုလို။ ၄ င်းတို့၏လုံခြုံရေးနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအလုံခြုံဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရန်လိုသည်၊ သူတို့၏လုံခြုံရေးသည်အမှန်တကယ်အာမခံချက်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးရမည်။ ဂူးဂဲလ်မှ ၄ င်း၏စနစ်များလုံခြုံမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဆုအစီအစဉ် မည်သူမဆိုလုံခြုံရေးအပေါက်ကိုရှာဖွေရန်ဖိတ်ကြားသည်။ ယင်း၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူသည်အနိုင်ရနိုင်သည် 20.000 ဒေါ်လာ.
ဤကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များကြောင့်တိကျသောပြသနာများကိုရှာဖွေရန်၊ နေ့စဉ်သတင်းပို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးအတွက်အထူးပြုအသုံးပြုသူအမြောက်အများရှိသည်။ တစ်ချက်အနေဖြင့်ဂူဂဲလ်သည်သူတို့ကိုချက်ချင်းပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်၊ သူတို့အများဆုံးလိုချင်ကြတယ်။ ဤအချိန်ငါမင်းအကြောင်းပြောပြရန်ရှိသည် အာမက် Mehtab, Security Fuss ၏ CEO နှင့်ပါကစ္စတန်သုတေသီတစ် ဦး ကိုရှာတွေ့ခဲ့သည် Gmail အတည်ပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကြီးမားတဲ့လုံခြုံရေးပြbigနာ.
ဂျီမေးလ်အကောင့်ခိုးယူရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို Ahmed Mehtab ကဖော်ပြသည်။
မှတ်ချက်ချခဲ့သည်အတိုင်း, ကြီးမားသောအိုင်တီနှင့်လုံခြုံရေးအသိပညာဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို အကောင့်တစ်ခု၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူပါ အထူးသရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြု။ ။ ပထမ၊ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ရန် SMTP လက်ခံသူကို ဆက်သွယ်၍ မရပါ၊ အကောင့်ပိတ်ထားသည်၊ လက်ခံသူသည်ပေးပို့သူအားယခင်ကပိတ်ဆို့ထားပြီး၊ သို့မဟုတ်အတည်ပြုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့မည့် ID မရှိပါ။
အကယ်၍ အထက်ပါအချက်လေးချက်အနက်မှတစ်ခုသည်ပြည့်စုံပါကအကောင့်ကိုခိုးယူလိုသောအသုံးပြုသူသည်ဂူဂဲလ်သို့အီးမေးတစ်ခုပို့ခြင်းဖြင့်အီးမေးလ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ လုံးဝအလိုအလျောက်နည်းလမ်းဖြင့်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အတည်ပြုရန်အတွက်လိပ်စာသို့တုန့်ပြန်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအီးမေးလ်သည်အတည်ပြုသောအီးမေးလ်ကိုမရရှိနိုင်သောကြောင့်၊ အကောင့်တစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူရန်ကုဒ်ဖြင့်မူရင်းသို့ပြန်ပို့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်သူသည်အဆိုပါအကောင့်အားထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » အသုံးပြုသူအတည်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်မှဂျီမေးလ်အကောင့်ကိုမည်သို့ခိုးယူရမည်ကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
Apple ကအဖြူရောင် iPhone7ကိုဖြန့်ချိနိုင်ပြီ
အမေဇုံက Xiaomi ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုရောင်းချခြင်းမှရုပ်သိမ်းလိုက်သည်